“Waxaan arkaa in xitaa abayaasha Soomaalida ay raadinayaan macluumaad ku saabsan autism iyo Asperger” Hodon Toosh. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News “Waxaan arkaa in xitaa abayaasha Soomaalida ay raadinayaan macluumaad ku saabsan autism...
“Waxaan arkaa in xitaa abayaasha Soomaalida ay raadinayaan macluumaad ku saabsan autism iyo Asperger” Hodon Toosh.
GOTHENBURG:- Xaaladaha autism iyo Asperger ee ku dhaca Caruurta yar yar ayaa mararka qaar sababa in waalidiinta Soomaalida ee ku nool Sweden ay ku dhibtoodaan maadaama fikir qaldan ay ka heystaan, taasi oo keenta in qaar ka mid ah waalidiintaasi laga qaato caruutooda.
Hodan Toosh oo ah mid ah talo bixiyayaasha Soomaalida ee ku nool Sweden ayaa waalidiinta Soomaalida la wadaagtay sida ay u maareyn karaan xaaladaha nuucaani ah iyo talooyin ku saabsan sida ay ula tacaalayaan.
“Waxaa jira walidiin badan oo ila soo xariira weyna kala duwanyihiin, kuwa wey iska indho tirayaan cudurada ilmahooda heysta iyagoo ka baqanaya maxaa la sheegi doona qaarna waa kuwa doonaya sidii ay macluumaad ku heli lahaayeen iyo kuwa kale oo markaasi ogaada in caruurtoodu ay cuduradaasi qabaan” ayay tiri Hodon.
Hadalkeeda iyadoo sii wadata ayay sheegtay Hodon in waalidiinta Soomaalida aysan ogeyn xaquuqaha dhaqaale ee ay xaqa u leeyihiin marka ay heystaan caruur dhimirkoodu uusan taam aheyn, arinkaasii oo ay xustay in ay ku wargeliso marka ay lasoo xariiraan.
Dhanka kale waxa ay wax wanaagsan ku tilmaamtay in qaar ka mid ah waalidiinta ay wax fahmayaan iyadoo xustay in xitaa aabayaasha Soomaalida ayraadinayaan haatan macluumaad ku saabsan xanuunada autism iyo Asperger.
Soomaalida ayaa inta badan aqoon buuxda aan u laheyn labadaani cudur waana sababta keenta xiliyada qaar in waalidku ay ku dhibtoodaan ilaalinta caruurtooda iyagoo ka biyo diida in laga caawiyo sidii loo daryeeli lahaa.
Previous articleSoomaalida ku nool wadanka Denmark oo soo dhaweyeeyay talaabo la xariirta Covid19.
Next articleNorwey oo sheegtay in uu racfaan qaadan doono nin heysta dhalasha Norwey oo dil ugu xakuman Somaliland.